Momba anay - Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
Amin'ny maha mpamatsy lehibe indrindra an'i Sina antsika amin'ny takelaka fanaovana dartatera sy ny latabatra lalao, dia manokan-tena izahay hanome vahaolana iray hitsaharana ho an'ny billiard rehetra sy filanao filokana.
WIN.MAX dia mijoro ho an'ny 'All for Sports' ary miezaka hatrany ny manavao, manana vokatra marobe manarona sokajy fanatanjahantena sy lalao isan-karazany.
Amin'ny maha mpamatsy lehibe indrindra an'i Sina antsika amin'ny takelaka fanaovana dartatera sy ny latabatra lalao, dia manokan-tena izahay hanome vahaolana iray hitsaharana ho an'ny billiard rehetra sy filanao filokana. Izahay dia mitondra ny latabatra latabatra fidiovana betsaka indrindra, latabatra foosball, latabatra tenisy ambony latabatra, latabatra hockey, dartboard, dartboard elektronika, kojakoja fanaovana zana-tsipika ary maro hafa ao Shina. Mikarakara ankizy sy olon-dehibe koa izahay.
Tsy ny fenitra indostrialy ihany no napetrakay ho an'ny kalitao fa ny endrika maoderina ihany koa. Izahay koa dia manitatra tsy tapaka ny portfolio-n'ny vokatra hihaonantsika amin'ireo fitomboan'ny mpanjifa.
WIN.MAX Sports dia mivarotra ny vokatra avy hatrany amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fivarotana marika, fivarotana ary e-varotra ary amin'ny alàlan'ny mpanjifa ara-barotra amin'ny rojom-panatanjahan-tena, mpivarotra antsinjarany, mpivarotra betsaka, klioban'ny fanatanjahan-tena ary mpaninjara. Tamin'ny volana desambra 2020, nandrakotra firenena 20 ny fikambanana mpivarotra WIN.MAX Sports.
Firenena / Faritra iasan'ny orinasa Floor 2, No. 6 Building, No. 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou City, Guangdong Province, China
Taona napetraka 2013
Karazan'orinasa Mpanamboatra, Orinasa mpivarotra
Laharana famokarana 3
Tombam-bidy fanao isan-taona US $ 5 tapitrisa - US $ 10 tapitrisa
Fahaiza-manao R&D Misy / dia injenieran'ny R&D latsaky ny 5 ny olona ao amin'ilay orinasa.
Ny ekipanay dia misy mpiasa efa za-draharaha amin'ity tsena ity, ao anatin'ny lalam-pihariana mitovy amin'izany nandritra ny 10 taona lasa. Ny ekipan'ny olona mpivarotra dia manana fahalalana momba ny tsena ary mitazona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa.
Misionera izahay hanampy ny mpaninjara hampandroso ny orinasan'izy ireo ary hahazo tombony amin'ny fifaninanana miaraka amin'ny fanohanan'ny vokatra.
Izahay dia ny orinasam-panatanjahantena ary mandresy izahay.
WINMAX dia marika ifantohana amin'ny fanomezana an-tsakany sy an-davany ny kalitaon'ny fanatanjahantena fialamboly avo lenta amin'izao tontolo izao.